Izahay dia mamakafaka ny TV Samsung MU6125, 4K ary HDR 10 amin'ny serivisy midadasika | Vaovao momba ny gadget
Ny televiziona dia manana fiasa misimisy kokoa izay mahatonga antsika hamoy ny tenantsika amin'ny ranomasina voafaritra tsara, Tsy manan-tsafidy afa-tsy ny miditra amin'ny Internet isika, ary tsy mora amintsika ny hiafara amin'ny fividianana bitro any amin'ny faritra midadasika, indrindra ny fiheverana ireo vidiny isan-karazany azontsika ekena amin'ireo toe-javatra ireo. Miresaka ny zava-misy isika fa ny tsenan'ny fahitalavitra dia tototry ny orinasa manolotra vokatra toa izao amin'ny vidiny tena hafa… inona ny tena maha samy hafa azy?
Androany isika dia hanadihady fahitalavitra antonony miaraka amin'ny famaritana avo lenta ary nisy vidiny mahatalanjona nandritra ny Zoma Mainty lasa teo, miresaka momba ny fahitalavitra isika Samsung MU6125, fahitalavitra afovoany izay mitondra vahaolana 4K sy HDR 10 ho an'ny paosy rehetra, andao handeha any miaraka amin'ny famakafakana.
Toy ny mahazatra dia hamakafaka amin'ny antsipiriany ny toetran'ity fahitalavitra ity izay manolotra endrika tsy mitovy amin'ny an'ny Samsung series hafa isika ary mety hahatonga antsika hisalasala, tsy isalasalana fa mila mandinika antsipiriany sasantsasany isika mba hahatsapantsika fa iray amin'ireo fitaovana nohavaozina -n'ny kalitaon'ny orinasa koreana na dia tsy mahazo ny toerana sahaza azy eo amin'ny talantalan'ny magazay lehibe aza, noho io antsipiriany io. Tsara homarihina fa ny singa dinihintsika dia novidina tao amin'ny magazay 499 euro, na eo aza ny fiakaran'ny vidim-piainana izay mitentina 679 euro eo ho eo. arak'ireo fivarotana manokana.
1 Volavola: Tena kilasika, tena Samsung
2 Toetra ara-teknika: fanitsiana ny fahitalavitra afovoany
3 Manohana azy rehetra: Ny tsara indrindra amin'ny Samsung MU6125
4 Negatives: Ny ratsy indrindra amin'ny Samsung MU6125
Volavola: Tena kilasika, tena Samsung
Tsy afaka manantena zavatra be loatra amin'ny famolavolana isika, indrindra satria ny faritra toy ny fanohanana sy ny sisiny dia nampiasaina tanteraka tamin'ny andiany hafa, indrindra indrindra fa manana ny fanohananay mitovy amin'ny ankamaroan'ny fitaovana an'ny samsung series 6 ho an'ny fahitalavitra. Ny zana-kazo mainty antrasite dia vita amin'ny plastika ary vita Jet Black, tia vovoka ary mety ho voan'ny micro-abrasion, izany no antony ilana mitadidy fa raha tia fanadiovana lalina isika dia tokony hikarakara izany fahitalavitra izany, indrindra fa ny filokana amin'ny vovoka na microfiber no tena ilaina.
Fitaovana plastika na aiza na aiza, miafina tanteraka. Fantatr'i Samsung tsara ny manafina an'io karazana pitsopitsony io, midika izany fa rehefa apetraka ny fahitalavitra dia handalo tanteraka amin'ny fitaovana Premium, fa rehefa tonga amin'ny fametrahana azy io dia ho tsapantsika fa maivana ny lanjany ary noho ny fihodinany dia manohana ny tontonana lehibe amin'ity Fahitalavitra 50 santimetatra.
Toy izany koa amin'ny fifehezana, baiko feno bokotra, plastika ary tsy misy fisehosehoana, manjaka indray ny fampiasa, indrindra ny fiheverana ireo fahafaha-manao goavana atolotry ny rafitra miasa azy ho antsika. Ireo ny refy ofisialy:
Total miaraka amin'ny fotony: 1128.9 x 723.7 x 310.5 mm
Milanja amin'ny fijoroana: 13,70 kg
Toetra ara-teknika: fanitsiana ny fahitalavitra afovoany
Toy ny mahazatra, hofintininay ireo toetra mampiavaka ny teknika, mba hahafantaranareo ny tanjonareo. Anisan'izany, marihina fa na eo aza ny fisian'ny USB maromaro ary na ny Ethernet aza, hankafizana ireo kojakoja multimedia maro, izay tsy ananantsika dia Bluetooth, zavatra malahelo indrindra rehefa mampifandray kojakoja fanampiny interface tsara.
tontonana Fisaka 50 santimetatra
vahaolana: 4K 3840x2160
HDR: Teknolojia HDR 10
fifandraisana HDMI: 3
fifandraisana USB: 2
Audio: Mpiresaka 20W roa miaraka amin'ny Dolby Digital Plus miaraka amin'ny Bass Reflex
Fitantanana loko: PurColor
Famaritana mavitrika: Mifanohitra amin'ny Mega
Slot slot CI
Output audio optika
Saingy misy zavatra tokony ho raisina ihany koa ny herin'ny fitaovana izay manafina ny Smart TV anao, ary izany dia ny filokana Samsung milina amin'ny solo-sainy sy ny rafitra fiasany, izay mahatonga azy io hiasa be, ao amin'ny Actualidad Gadget izay efa tia Android foana isika TV, Tokony holazaintsika fa miaraka amin'i Tizen dia tsy ilaina mihitsy ity fitaovana fanampiny ity ho an'ity karazana lahasa ity. Hevi-dehibe iray hafa koa ny fiatrehantsika televiziona misy fahombiazan'ny angovo Class A, tsy io no tsara indrindra eny an-tsena, saingy manome valiny mahavariana amin'ny fanjifana.
Manohana azy rehetra: Ny tsara indrindra amin'ny Samsung MU6125
Manana vidiny mifaninana izaitsizy izahay, mifanatrika tontonana VA misy vahaolana 4K izay manolotra antsika mifanohitra tena tsara, izany hoe afaka mankafy sary milamina amin'ny vahaolana tsara isika, tsy misy famoahana maivana sy grayscale tsara. Ny tena izy dia toa maranitra ny sary, na dia eo aza ny fiheverana fa miatrika tontonana 50-inch isika, dia miharihary fa mihodinkodina kokoa ny fanapahan-kevitra ambany noho ny 1080p Full HD.
Mahatalanjona fotsiny ny rafi-piasany, afaka mankafy ny atiny an-tserasera isika amin'ny alàlan'ny browser-ny ary manararaotra ny fifandraisana WiFi, afaka mifandray amin'ny tambajotra 5 GHz aza. Toy izany no mihetsika ity TV ity, nefa tsy manadino izany noho ny Netflix ary koa Movistar + Amin'ny maha rindranasa mifanentana anao ao amin'ny fivarotanao dia afaka mankafy ny atiny HDR an-tserasera sy amin'ny vahaolana 4K izahay. Avelan'i Tizen hanararaotra betsaka amin'ny fahitalavitra àry isika.
Ny audio dia miaro tena amin'ny fomba mahavariana, miaraka amin'ny tariby optika ary manao mpivady tsara miaraka amina bara fanamafisam-peo, ny mampiavaka azy Dolby dia aseho mihoatra ny ampy. Tsy isalasalana fa mandeha tsara ny fahitalavitra ary mampiseho mihoatra noho ny ampy ho an'ny besinimaro amin'ny karazan-vokatra io.
Negatives: Ny ratsy indrindra amin'ny Samsung MU6125
Tsy ho tsara ny zava-drehetra, ny lafy ratsy voalohany eo alohan'ny tontonana misy 8Bits isikaMidika izany fa na dia manana HDR 10 aza isika ary hanararaotra ny fenitra HDR tsara indrindra, dia tsy afaka hivezivezy eo anelanelan'ny elanelana rehetra atolotray antsika izy, ary noho izany dia mila takelaka 10Bits, voamarikao ve ny tsy fitovizany? Angamba tsy ampy ho an'ny mpampiasa mahazatra.
Tsy manana fahitalavitra Bluetooth ihany koa, zavatra izay tsy voatery tsy ho hitantsika, raha tsy te-hihary amin'ny tariby ianao, ohatra, rehefa mampifandray feon-tserasera mifanentana, na ohatra ho an'ny fifehezana kojakoja ao amin'ny interface interface. Farany, mariho fa toa tsy fahita lavitra ny fahita lavitra amin'ny televiziona, indrindra ho an'ireo mpampiasa be mpitady indrindra amin'ny resaka famelombelona sy ny fahatongavan-tsofina, na eo aza ny fisian'ny lalao fomba hamahana tsara ny raharaha, fotoana valin'ny 10 ms , Tsy dia betsaka, intelo ohatra, mpanara-maso manokana.
Rafitra fahitalavitra Smart
Tsy isalasalana fa miatrika televiziona iray izay tery fatratra ny vidiny isika, fa tsy amin'ny toetra mampiavaka azy, Samsung dia nametra ny tenany hanapaka fanampiny, fa tsy amin'ny bika aman'endriny, ary noho izany dia mahazo efijery 50-inch miaraka amina endri-javatra lehibe. Na dia marina aza dia toa tsy manintona loatra izany raha manodidina ny 700 euro, raha jerentsika fa azo amidy amin'ny 499 euro izany dia mety ho safidy mety hanovana ny fahitalavitra. Azo antoka fa amin'ity vidiny ity dia tsy hahita zavatra tsara kokoa eny an-tsena ianao.
Famolavolana minimalista sy rafitra kely
4K sy HDR10
Tsy misy Bluetooth
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Izahay dia mamakafaka ny Samsung MU6125 TV, 4K ary HDR 10 amin'ny serivisy eo afovoany
Te hahafantatra aho raha misy fampiasa HDMI 2.0 ity fahitalavitra ity
Salama, tiako ho fantatra ny fomba ahafahako mampifandray headset. Misaotra anao
Tsy manana Bluetooth io.